Nin saarnaa Diyaarad kusii jeeday India oo la xiray kadib… - Hablaha Media Network
Nin saarnaa Diyaarad kusii jeeday India oo la xiray kadib…
HMN:- Boliska la dagaalama Argagixisada ayaa xiray Nin Rakaab ah oo la socday Diyaarad isaga kala gooshaysay magaalladda Dubai ee dalka Imaaraadka, kuna sii jeeday magaalladda Kerala ee Koonfurta dalka Hindiya.
Ninka la xiray ayaa ku dhawaaqay hadalo uu ku aamanayey Kooxda Daacish, isagoo saarnaa Diyaaradda Shirkadda The IndiGo
Ciiddanka waxay ku amreen Duuliyaha inuu Diyaaradda u weeciyo Garoonka Diyaaradaha ee magaalladda Mumbai.
Waxaa jira warar sheegayo markii u Ninku bilaabay inuu ammaano Kooxda Daacish ayaa loo itaal-sheegtay markii uu amray in Diyaaradda la dejiyo.
Saraakiisha Garoonka Diyaaradaha Mumbai ma xaqiijinin inuu Ninkaasi ku hadlay erayo uu ku taageeray Kooxda Daacish, balse Boliska waxay uu gudbiyeen Qeybta Baarista markii ay Diyaaradda soo caga dhigatay Garoonka.
Wargeyska The Mirror ee ka soo baxa magaalladda London ayaa ka soo xigtay Websaytka Kaumudi Online in ninka la eedeeyey laga codsaday inuu Diyaaradda ka soo dego.
Mid ka mid ah Saraakiisha Garoonka Diyaaradaha Mumbai ayaa yiri: “Duullimaadka IndiGo Flight oo ka timid Dubai, kuna sii jeeday Kozhikode ayaa si degdeg ah u soo caga dhigatay Garoonka Mumabi abaarihii 09:15s daqiiqo ee saakayto, iyadoo lagu arkay Nin ka mid ah Rakaabka oo ku kacay dabeecad-xumo”.
Telefishinka IndiaTVNews ayaa baahiyey in Duulimaadkii GE-89 ee Diyaaradda IndiGo la weeciyey, kadib, markii uu Rakaab fadhiyey Kursiga 5D oo la safrayey Walaalkiisa si kedis ah u bilaabay inuu dabeecad-xumo kula kacay Shaqaalihii Diyaaradda.
Ninka ayaa la sheegay inuu ku booday oo fuulay gaari-gacanka lagu qaado raashinka Rakaabka, waxayna Shaqaalihii Diyaaradda ka codsadeen Ninkii inuu ka dego gaariga,balse waxa uu bilaabay dagaal iyo faalad-xumo, ilaa ay Shaqaalihii Diyaaradda isku hawleen inay isaga kontoroolaan.